Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Industrylọ Ọrụ Ọbịa » Ọfụma Uru dị ka Amman Hotels na-agba mgba iji nweta ụgwọ
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Lebanon • News • Mmelite nke Njem njem
N'agbanyeghị na ị na-edekọ 1.0 pasent na-abawanye na ego ha nwetara na ọnwa a, ụlọ oriri na ọ inụmanụ dị na Amman nwere mbelata pasent 6.1 maka uru kwa ụlọ ka ọnụ ahịa na-arịwanye elu.
Ebe ụlọ oriri na ọ hotelsụ inụ dị na isi obodo Jọdan dekọtara ọnụego 3.0 pasent kwa afọ na ọnụnọ ụlọ, rue 59.2 pasent, kagburu nke a site na nbelata 6.3 pasent iji nweta ọnụego ọnụego ụlọ, n'ihi nke a, Amman hotels dekọtara otu pasent 1.3 kwa afọ na RevPAR, ka $ 86.60.
N'agbanyeghị ọdịda thelọ Ego, Amlọ oriri na ọ ,ụ Amụ nke 1.0% na TrevPAR (Total Revenue per Available Room) mebere ụlọ nkwari akụ Amman ka ọ bụrụ $ 142.09, na-agbalite site na mmụba nke ego na-abụghị ụlọ, gụnyere Food and Beverage (+ 4.7 pasent) na Nzukọ na Banqueting (+1.2 pasent) na otu ụlọ dị.
Otú ọ dị, ọnụahịa na-arịwanye elu, gosipụtara site na mmụba na Payroll (+ 2.2 pasent) na Overheads (+6.5 pasent) n'ọnwa a na ọnọdụ a yikarịrị ka ọ ga-akawanye mma n'oge dị mkpirikpi ka gọọmentị kwupụtara n'oge na-adịbeghị anya mmụba ụtụ na mmanụ ọkụ ọnụahịa yana ọtụtụ ngwaahịa iji luso ọgụ mmefu ego ya.
N'ihi mmụba na-arịwanye elu na-akagbu uto nke ego zuru ezu, ọkwa uru na ụlọ nkwari akụ na Amman jiri 6.1 pasent kwa afọ na March daa, na $ 47.83 kwa ụlọ dị.
Nsonaazụ a dabere na nyocha ọhụụ HOTSTATS.